IMelika - Wikipedia
Izifundazwe Ezihlangene zaseMelika izwekazi yiMelika-nyakatho. Inezifundazwe ama-50. Umongameli weMelika manje nguDonald Trump.
United States of America (IsiNgisi)
Isaga: "In God We Trust" (isemthethweni)
E Pluribus Unum (inkambo)
(isiLatin: Eningi, Kunye)
Inkondlo: "The Star-Spangled Banner"
Isiqongo Washington, D.C.
- Umongameli Donald Trump
- Isekela Mike Pence
- Bazisa ahlukana wOmbuso Ohlangeneyo 4 ngoNtulikazi 1776
- Bavuma ahlukana 3 ngoMandulo 1783
- Umthethosisekelo manje 21 ngoNhlangula 1788
- Jikelele 9,833,520 km2 (3rd)
- 2019 ukulinganisa 328,239,523
- Ixuku labantu 33.7/km2
Izifundazwe ezibumbene zase Melika (ezifinyezwa ngokujwayelekile njengezifundazwe ezibumbene)
iMelika yakhiwe amazwe amaniningi kanye nezifundazwe ezihlukahlukene ezihlangene ngawonye ukuthi zibe yimbumba zaziwe emhlabeni wonke njengezwe elilodwa elibizwa nge Melika. IMelika ingelinye lamazwe amakhulukazi emhlabeni wonke jikelele ngokuba nabantu abaningi abahlala kulo, abalinganiselwa ngaphezulu kwamakhulu amathathu wezigidi. Laba bantu abahlala kulezwe bavela ezinhlangeni ezahlukene, kukhona abantu abamnyama, kube khona abelungu, kube khona amashayina kanti kuphinde kube khona amandiya. Imvamisa yamandiya aziwa njengama "Red Indians" ngokuthanda ukuzigcoba ngokubomvu futhi bahlale ndawonye.
iMelika yizwe lesibili ngobukhulu bomnotho emhlabeni, ilandela izwe lase Shayina. Miningi imikhiqizo ephuma kuleli lizwe ethunyelwa emazweni angaphandle. Kanti futhi iningi losozimali liqhamuka kuleli lizwe. IMelika isibe noMongameli abaningi kodwa kwaqopheka umlando lapho kubekwa khona uBarack Obama njengo Mongameli wokuqala womdabu ukuthi aphathe lelizwe.
Ngonyaka ka 2001 enyangeni ka September 11, kwenzeka umshophi lapho kwaphahlazeka izindiza ezine, ezimbili zazo zanhlitheka kumabhilidi akade aziwa ngokuthi yi-"Twin towers". Lokhu kwahlala emlandweni kuze kube namuhla. IMelika iyizwe elikhangayo futhi elivakashelwa abantu abaningi emhlabeni jikelele.
The United States of America (USA nobe USA), sivame ukubizwa ngokuthi i-United States (US nobe US), eMelika, kanti ngezinye izikhathi-United, kuyinto republic federal ehlanganisa 50 uthi futhi esifundeni sikahulumeni. Lithi contiguous 48 naseWashington, DC, kukhona enkabeni Nyakatfo Melika ephakathi Canada ne Mexico. Isimo Alaska kuyinto ingxenye ntshonalanga yeNyakatho Melika kanye isimo eHawaii kuyisici leziqhingi maphakathi nawo-Pacific. Yezwe unabo ezinhlanu enabantu nesishiyagalolunye amasimu unpopulated ePacific kanye eCaribbean. Ka million 3,71 amakhilomitha-skwele (million 9,62 km2) kanye nabantu abayi 318 million abantu, i-United States 3 emhlabeni noma 4th ngobukhulu izwe by endaweni inani nowesithathu ngobukhulu by labantu. Ingenye kunazo Abase izizwe zezwe ezihlukahlukene amaningi, umkhiqizo ezinkulu kwamanye amazwe ezivela emazweni amaningi. I geography kanye sezulu-United States futhi ezihlukahlukene kakhulu, futhi kuba kumuntu ezihlukahlukene zasendle ekhaya .
Paleo-amaNdiya bafudukela kusukela Eurasia kulokho manje ezwenikazi US azungeze 15,000 edlule, nge ikoloni European Kusukela ngekhulu le-16. The United States saphuma 13 amakoloni waseBrithani akhiwe egudle seaboard Atlantic. Izimpikiswano emkhatsini Great Britain nalaba amakoloni kwaholela American Revolution. Ngo 4 July 1776, njengoba amakoloni elwa Great Britain in the American Revolutionary War, izihambeli ezivela amakoloni 13 eyakhishwa ngazwilinye Declaration of Independence. Impi yaphela ngo 1783 kanye nokubhekelelwa uzibuse-United States kusukela Kingdom of Great Britain, futhi kwaba impi yokuqala ngempumelelo uzibuse elithweswe umbuso zamakoloni European. UMthethosisekelo yamanje elamukelwa ngo 17 September 1787. Eyokuqala izichibiyelo eziyishumi, bebonke okuthiwa i Bill of Rights, base izibophezele ngo 1791 uqiniseke abaningi amalungelo yombango lasisekelo kanye nenkululeko.
Beqhutshwa imfundiso zibonakale ikusasa, United States baqala ukwanda eyingqabavu yonkana Nyakatfo Melika kulo lonke ikhulu le-19. Lokhu ababehilelekile displacing zakwa bomdabu, nizuza amasimu amasha, futhi kancane kancane ukuvuma uthi ezintsha. The American War Civil yaphela kobugqila zomthetho kuleli lizwe. Ekupheleni kwekhulu le-19, i-United States enwetshiwe ePacific Ocean, kanye nomnotho walo kwaba emhlabeni ngobukhulu. AbaseSpain-American War kanye neMpi Yezwe I ukuqinisekisile isimo wezwe njengoba amandla global ezempi. The United States saphuma iMpi Yezwe II njengendlela ukubangisana kwemibuso emikhulu global, lizwe lokuqala ngezikhali zenuzi, futhi ilungu unomphela United Nations Security Council. Ekupheleni kweMpi Yomshoshaphansi kanye kuqedwa Union washiya United States njengoba ukubangisana kwemibuso emikhulu yedwa.
Past President Barack Obama
Ukhozi impandla, inyoni wezwe
iMayflower, ubethutha imihambima eMelika kuya Umbuso Ohlangeneyo ngo-1620
u-Buzz Aldrin engaphandle wenyanga ngo-1969
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=IMelika&oldid=60589"
Last edited on 7 uNhlangulana 2020, at 09:08
This page was last edited on 7 uNhlangulana 2020, at 09:08.